လေ့ကျင့်ခန်းသည်စွဲလမ်းမှုအတွက် ဦး နှောက်ကိုမည်သို့အသုံးချနိုင်သနည်း (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
မှတ်ချက်များ။ ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့မကောင်းပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းစတင်ပါ ပြီးနောက် စွဲဖြစ်လာ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအားလျော့စေသည်။ အောက်ခြေလိုင်းလွယ်ကူသည် - လေ့ကျင့်ခန်း။ ကြွက်ဘီးကိုစီး။ ၎င်းပေါ်တွင်ပြေးပါ။
ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်း Can ချုပ်ယင်းဦးနှောက်စွဲများအတွက်
ဧပြီလ 11, 2012, 12: 01 နံနက်
စာရင်းအင်း, တငျပွသူကလူအများကြီးလျော့နည်းဖွယ်ရှိမလှုပ်မရှားကလူမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်သေစာအလွဲသုံးစားဖို့ထက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အကူအညီထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းစှဲတငျပွနိုငျသနညျး တချို့ကသုတေသနလေ့ကျင့်ခန်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အခြားတ္ထုများအဘို့မတရားသောလျော့ပါးစေရန်ကူညီခြင်း, ဦးနှောက်အတွက်ဆုလာဘ်စင်တာများကိုလှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါပြသထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ကင်း-စွဲကြွက်များ၏မျက်စိ-ဖွင့်လှစ်လေ့လာမှုအသစ်အရသိရသည်ဆက်ကပ်အပ်နှံလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ခုစွဲကိုချိုးဖျက်ဖို့ကပင်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။
Urbana-Champaign ကအတွက်အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှအဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများအတွက် Beckman Institute ကသုတေသီတွေကအားဖြင့်ကောက်ယူအဆိုပါလေ့လာမှု, ရှိခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အိတ်များအတွက်ဘီး running ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသောသူတို့ကိုသို့အထီးကြွက်တွေခွဲဝေခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကြွက်အားလုံးအသစ်ဖန်တီးဦးနှောက်ဆဲလ်တွေခြေတစ်လှမ်းတဲ့ဓာတုနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာထိုင်လျက်သို့မဟုတ် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့အလိုတော်မှာပွေးလေ၏။
အဲဒီနောက်ကြွက်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသေးငယ်တဲ့ multiroom အခန်းနေရာချခြင်းနှင့်အရည်ကိုကင်းမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကကြိုက်တယ်။
သုတေသီများမကြာခဏတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလေ့လာဖို့ "conditional ရာအရပျ preference ကို" အဖြစ်လူသိများနေတဲ့မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦးကြွက်ပြန်ဖို့နဲ့ခေါင်းမာမာကမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အခြားနှစ်သက်ပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံရရှိထားတဲ့အထူးသဖြင့်အရပ်ဌာန၌ကိုယ်နှိုက်ကိုစိုက်ပျိုးလျှင်, သုတေသီတိရစ္ဆာန်လေ့ဖြစ်လာသည်ကောက်ချက်ချ။ ဒါဟာဆိုးရွားစွာကအရပျမြားနှငျ့ဆသောအတှေ့အကွုံပြန်လုပ်စေချင်တယ်။
ကြွက်အားလုံးသည်သူတို့ကင်းလက်ခံရရှိရှိရာ၎င်းတို့၏အခနျးအတွင်းအစက်အပြောက်တစ်ခု decided ရာအရပျ preference ကိုပြသ။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပျော်အပါးနဲ့တည်နေရာပေါင်းသင်းသင်ယူခဲ့သည်။ ကြွက်အားလုံးသည်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့, စွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါအထိုင်များတိရစ္ဆာန်များ၏အခြို့သောထို့နောက်ဘီး running ပေးထားသောနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းအမြဲတမ်းဘီးရှိခဲ့ဖူးသောသူတို့ကြွက်တွေကသူတို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါသုတေသီများတိရစ္ဆာန် '' မူးယစ်ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးဖြတ်ကသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးရာအရပျမှ scuttling ရပ်တန့်ဖို့သူတို့အယူကိုဘယ်လိုရှည်လျား watched ။ အဖြစ်လူသိများဤဖြစ်စဉ်ကို "ဟုအဆိုပါ conditional ရာအရပျ preference ကို၏မျိုးသုဉ်း," တိရစ္ဆာန်က၎င်း၏စွဲကျော်လွှားမူကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။
Tသူသုတေသီများစွဲလေ့ကျင့်ခန်းအကြားနှစ်ဦးကိုကွဲပြားပုံစံများမှတ်ချက်ချသည်။ သူတို့စွဲဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးမှသာအပြေးစတင်နေပြီဖူးသောယခင်အထိုင်များကြွက်တွေကသူတို့အခွအေနေအရပျကို preference ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သိသာလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့အဘို့ကအလေ့အထကိုချိုးဖျက်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်ထင်ရှား။ ,
မှာအားလုံးပါလျှင်သူတို့ပထမဦးဆုံးကိုကင်းကြိုးစားခဲ့သည့်အခါအပြေးသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသူတို့, သို့သော်, ဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့ preference ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အတော်များများက, တကယ်တော့, မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်ဒေသ, စွဲလမ်း၏တန်ခိုးကိုအစိုးရတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲဖှယျသတိပေးချက်ထွက်ဆွဲထားရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
"သတငျးကောငျးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး-ဒါ-မကောငျးတဲ့သတင်းရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုကို Justin အက်စ် Rhodes, t ကို၏မာတီအယ်လ် Mustroph နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်က atthe စိတ်ပညာပါမောက္ခတစ်ဦးကိုရေးသားသူ, ကပြောပါတယ်သူကအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာ.
"ဒါပေမယ့်တကယ်ဘာလေ့လာမှုပြသထားတယ်" ဟုသူက, ဆက်ပြီး "လေ့ကျင့်ခန်းသင်ယူမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက်အလှနျဖြစ်၏။ "
အဆိုပါကြွက်များ၏ဦးနှောက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြသောအခါသူထောက်ပြသည်အပြေးသမား, အထိုင်များကနျြရစျခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများကအတည်ပြုတဲ့တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်. နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အများအပြားအသစ်ကဦးနှောက်ဆဲလ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု, သို့မဟုတ်၎င်း၏အခြေအနေတွင်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုအတွေးပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းသည်ဦးနှောက်၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဝေဖန်စီတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ hippocampus အတွက်ဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်။
ဒါကြောင့်သုတေသီများအဆိုပြု, သူတို့ကကင်းဖို့မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်မတိုင်မီအပြေးခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များသင်ယူဖို့ရစေတယ်အသစ်ကဦးနှောက်ဆဲလ်တွေတစ်ဝပြောသောထောက်ပံ့ရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူတို့သင်ယူမူးယစ်ဆေးတပ်မက်ဖို့ပဲ။ အကျိုးဆက်သူတို့ပိုပြီးအခက်အခဲသူတို့သင်ယူချင်ပါတယ်အဘယျသို့မေ့နဲ့သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းထဲကနေအပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုနေ့ယန္တရားစွဲဖြစ်လာပြီးနောက် running စတင်ခဲ့ကွောငျးတိရိစ္ဆာန်များအကြိုးထင်ရှား။ , သူတို့ရဲ့အသစ်ကဦးနှောက်ဆဲလ်များကိုလျင်မြန်စွာကင်းကွာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်တစ်ချိန်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နေရာပေါင်းသင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်း, ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းမှညှိစတင်ရန်သင်ယူဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
"အခြေခံ, ရလဒ်အားတက်စရာပါ," ဟုဒေါက်တာ Rhodes ကပြောပါတယ်။ သူတို့ကအားကောင်းတဲ့လူငယ်အာရုံခံများထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်ဆအားဖြင့် "လေ့ကျင့်ခန်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ " အဲဒီကိုပြသ
ဒါပေမယ့်တွေ့ရှိချက်လည်း, ဤအသစ်သောဆဲလ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဖြစ်ကြောင်း underscore နှင့်အသငျသညျသငျယူဖို့အဘယ်အရာကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကသငျသညျရှိတ်စပီးယားကျက်မှတ်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအပေါ်မှီခိုကြီးထွားလာနေဖြစ်စေ, လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်။
အရာတစုံတခုကိုမျှဒေါက်တာ Rhodes ကပြောပါတယ်, လေ့ကျင့်ခန်းကနေသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ရေးစှဲဖို့လေ့ကျင့်ခန်းကို အသုံးပြု. မှလူတားသင့်ပါတယ်။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စွဲလမ်း၏ "ကျနော်တို့ကတဦးတည်းကျဉ်းမြောင်းသောရှုထောင့်ကြည့်" သူသည်သင်ယူအပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာနိုင်ဖို့ဆက်စပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူကလေ့ကျင့်ခန်းကဦးနှောက်အတွင်းရှိဆုလာဘ်စင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပုံကိုပြသကြသည့်အခြားသုတေသီများအားဖြင့်လေ့လာမှုအတော်များများထောက်ပြသည် "မူးယစ်ဆေးမတရားသောအဘို့ကိုအစားထိုးခြင်းငှါ," ဟုသူကပြောပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်များနီးပါးအမြဲ run မရနိုငျသောတိရိစ္ဆာန်များထက်မူးယစ်ဆေးများလျော့နည်းယူဖို့ရှေးခယျြဥပမာ, running ဘီးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးမှမိမိဆန္ဒအလျောက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတော်မူ၏။ သူတို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးလျော့နည်းလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်, လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေ "သူတို့ကတစ်ဦးဘတ်ဇ်၏လုံလောက်စွာရဟန်".
"ဒါဟာတကယ်ကိုတစ်ဦးမျှမ-brainer ရဲ့" ဟုဒေါက်တာ Rhodes အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ "လေ့ကျင့်ခန်း။ နီးပါးတိုင်းလမ်းအတွက်သင်တို့အဘို့ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်" ဒါပေမယ့် "လေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်ယူဖို့ကြီးမြတ်သောစွမ်းရည်ဖန်တီးပြုပါ, ထိုသို့အမြော်အမြင်ရှိရှိကြောင်းစွမ်းရည်သုံးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းမှတက်မယ့်အကြောင်း, သူကထပ်ပြောသည်, စိတျထဲတှငျထမ်းပညာရှိဖြစ်၏ ။ "